Yakakwira frequency maginiti induction ichiona simbi kusimbi yesimbi maitiro
HLQ timu yakapihwa nezvikamu zviviri zvakasiyana kuti zvinyorwe murabhoritari yemubvunzo.
Chinangwa: Induction Brazing ye 0.15 '' / 3.81mm isimbi isina pini pasimbi yesimbi.
Zvishandiso: DW-UHF-6KW-III ruoko rwakabata induction brazing system
Industry: Zvishandiso & HVAC
Hexagon yesimbi (base 1 '' / 25.4 mm diimita; 0.1 '' / 2.54 mm ukobvu madziro)
Pini isina simbi (0.15 '' / 3.81 mm)
Zvese-chinangwa chena ichipenya flux
Kutya: 1400 ° F / 760 ° C
Time: 8 masekondi
Idzi mbiri dzekubatira dzakanyatsoiswa pamwechete. Zvese-chinangwa kuburitsa kusungurudza dema flux yakawedzerwa nekuti yakanakira kupisa kwakanyanya tembiricha uko nekukurumidza, kwenzvimbo kudziya kunodiwa. Maitiro a kuburitsa kusungurudza chakaitwa zvinobudirira mukati memasekondi masere nekushandisa DW-UHF-6KW-III ruoko rwakabata induction brazing system, kugadzira induction heat power of 1.43 kW pa1400 ° F / 760 ° C.
Categories Technologies Tags kusungira simbi tsvina, kuvhenekera simbi isimbi, HF isingaonekwi nesimbi, High Frequency Brazing steel, kuburitsa kusungurudza, induction brazing machine, kuburitsa kusungira sinai, induction ichiona simbi nesimbi Post navigation